Rotary Club Tsimbaroa Antananarivo - Ankizy 70 000 no ezahina hisitraka ny « bibliobus » ao anatin'ny herintaona
Publié juillet 8, 2019 par Book News
Hamafisina ny asan’ny « bibliobus » mandritra ny fotoam-piasana 2019-2020″, hoy ny Filohan’ny Rotary Club Tsimbaroa Antananarivo vaovao, Lizah Ndrialisoa.
Hatramin’ny taona 2005 no niasa ho an’ny ankizy eny amin’ny sekoly Ambatonakanga voalohany sy Ambatonakanga faharoa ny « bibliobus » Rotary Club Tsimbaroa. Mitety ny faritra Antananarivo sy ny manodidina ity « bibliobus » ity, izay tarihin’ny Ffara lehibe iray. Miankina amin’ny fangatahan’ny lehiben’ny Fokontany, ny kaominina ary ny tomponandraikitra ny sekoly ny fandalovany amin’ny toerana iray.
Zava-dehibe ny fisian’ity fotodrafitrasa ity satria mampiakatra ny fahalalan’ireo ankizy. Tanjona amin’izao hetsika izao ny famporisihina ireo mpianatra hamaky boky mba hampivoarana ny firenena.
Lizah Ndrialisoa, Filohan’ny Rotary Club Tsimbaroa Antananarivo vaovao. cc: Toria Dimbiniaina
Efa mahatratra 1 tapitrisa no isan’ny fiakarana tamin’ity « bibliobus » ity ary maharitra antsasa-kadiny ka hatramin’ny adiny iray eo ny ankizy eo amboniny. Mahazaka olona 40 ity fotodrafitrasa ity. Ahitana boky mifanaraka amin’ny fandaharam-pianarana­ eo anivon’ny sekoly, « connexion Internet » ary mpampianatra roa. Ireto farany izay manampy ny ankizy amin’ny fanatsarana ny fianarany, ny fanaovany ny zavatra rehetra hampiharina any an-tsekoly.
Ankoatra ny boky sy ny « connexion internet » dia ahitana kilalao toa ny fanorona sy ny « échecs » ihany koa ity bibliobus ity. Mandray ny sekoly rehetra manodidina ny “bibliobus”-n’ny Rotary Club Tsimbaroa.
Marihina fa ao Ilafy no misy ity fotodrafitrasa ity amin’izao ary hifindra eny Imeritsiatosika amin’ity volana ity.